prime life insurance company ltd(prime life insurance company ltd) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स १५ औँ वर्षमा प्रवेश, कस्तो छ लाभांश इतिहास ?
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आज (जेठ २२ गते)बाट १५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। २०६५ जेठ २२ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जीवन बीमा क्षेत्रमा आफ्नो बिशेष पहिचान स्थापित गरेको छ। सवल सुरुआत सँगसँगै सबल संरचनायुक्त व्यावसायिक स्वरुप तथा संस्थागत सुशासन प्रणाली अवलम्बन गरी नेपालको उत्कृष्ट जीवन बीमा कम्पनीका रुपमा आफ्नो...
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा सेयर स्वामित्व परिमार्जन, अब संस्थापक र सर्वसाधारणको कति–कति ?
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको छ। कम्पनीले झन्डै २८ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको हो। सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न कम्पनीले २७ लाख ७९ हजार ६१५.५८ कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण...
कास्कीको लेखनाथमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको उपशाखा विस्तार
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कास्कीको लेखनाथमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज भट्टराईले सोमबार उपशाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। कम्पनीका प्रडक्टप्रति सर्वसाधारणको बढ्दो चाप र बिमितको मागलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले लेखनाथमा कार्यालय खोलेको हो। कार्यालय...
संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्दै प्राइम लाइफ
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीमा रहेको संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो। कम्पनीले बीमा समितिको स्वीकृतिपछि र १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरी...
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक ७ जना निर्वाचित भएका छन्। कम्पनीको आइतबार सम्पन्न १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापकबाट ४ जना, सर्वसाधारणबाट २ जना र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक चयन भएका हुन्। सभाले संस्थापक समूहबाट पियूषराज अर्याल, दिपेश अमात्य, डा सन्तोष अग्रवाल र प्रमिला केसी थापा, सर्वसाधारण समूहबाट...
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १४ औँ वार्षिक साधारणसभा आज मंसिर १९ गते आयोजना गर्दैछ। गत कात्तिक २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा मंसिर १९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सभा काठमाण्डौको हात्तीसारस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु ह�...
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा मंसिर १९ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १४ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज बिहान बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो मंसिर १९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। लाभांश र सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले आउँदो मंसिर १० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ मंसिर ९ गतेसम्म कायम...
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले चुक्तापुँजी २ अर्ब ४१ करोड ७० लाख ५७ हजार २३ रुपैयाँको कुल १५.८७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश १५ प्रतिशतले हुन आउने ३६ करोड २५ लाख ५८ हजार ५५४ रुपैयाँबराबरको...
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन २ करोड २३...
प्राइम लाइफका विभिन्न भुक्तानी अब पूर्णस्वचालित रुपमा हुने
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्युरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आजबाट आफ्ना सम्पूर्ण भुक्तानी स्वचालित रूपमा सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाको थालनी गरेको छ। यसरी एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) प्रयोग गरी यसभित्र रहेका एनसीएचएल–आईपीएस तथा कनेक्ट आईपीएस प्रणालीहरुमार्फत आफ्ना विभिन्न प्रकारका भुक्तानी...
प्राइम लाइफ : बीमा शुल्क आर्जन रु. २ अर्ब, नाफा २४.१०% ले बढ्यो
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीको सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २७.०१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बीमा शुल्क आर्जन १ अर्ब ५८ करोड...
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स एनसीएचएलसँग आबद्ध, अब सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) को भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापत्रमा प्राइम लाइफण्का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका...
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कायम चुक्तापुँजी २ अर्ब २५ करोड ८९ लाख ३१ हजार ७९७ रुपैयाँको कुल १५ प्रतिशतले हुन आउने ३३ करोड ८८ लाख ३९ हजार ७७० रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।...